Hanamboatra ny fiainanao ho mora kokoa ny fiainanao amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny fitaovana maranitra | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara16 BursaHanamboatra ny fiainanao ho mora kokoa ny fiainanao amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny fitaovana marani-tsaina
25 / 01 / 2020 16 Bursa, ANKAPOBENY, Highway, Headline, Faritra Marmara, fiara, TORKIA, VIDEO
Hanamora ny fiainanao ho mora kokoa ny fiainanao amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ireo fitaovana marani-tsaina
Tiorkia Cars Initiative Group (TOGG) antsipirihan'ny tetikasa vaovao nitarika ny an-toerana automakers Orty mbola handeha. Nisy horonantsary vaovao momba ny fomba fiasa TOGG mahavariana amin'ny asan'ny kaonty media sosialy no navoaka.
Ny fanambarana hoe: "Ny fifandraisana mitohy # türkiyeninotomobil ny teknolojia, mahay mifandray amin'ny fitaovana mba ho mora kokoa ny fiainanao ary homeny ho anareo vaovao toerana velona." Nandray ao amin'ny fanambarana.
Izahay dia mamaritra fa toy ny ekosistemika izay mifandraika amin'ny haino aman-jery mahay ary manome sanda.
Noho ny fampiasana telefaona fitaovana mifandraika amin'ny Internet toy ny finday, fahitalavitra maranitra, entana fotsy fotsy ary na dia tambajotra hendry aza, dia mihamalalaka ihany koa ny ekipamiazin'ny fiainana miaina ao amin'ny tontolo iainana.
Mametraka ny fiaranay ho toy ny mpitantana eto afovoan'ity tambajotra vaovao ity izahay.
Hatramin'izao aloha, ny aterineto raha mbola tao anaty fiara Cars Torkia dia hahazo fanohanana ao amin'ny aterineto.
Amin'izany fomba izany, dia hifandray hatrany amin'ny fitaovana sy rafitra rehetra izy ireo izay afaka mifandray amin'ny Internet.
Ambonin'izany, rehefa mametraka io fifandraisana io dia tsy maninona izay mpamatsy ny fitaovana na rafitra mipetraka misy fanontaniana na inona ny marika.
Io dia hamela anao hifehy ny fitaovana na rafitra rehetra afaka mifandray amin'ny Internet lavitra, izany hoe avy amin'ny fiaranao.
Ity rafitra ity, izay hanampy anao koa, dia hianatra ny fitondran-tenanao sy ny filanao ary hanoro anao fizahana marani-tsaina mifanaraka amin'izany.
Rehefa nandao ny tranonao ianao, 'Dia nitohy ve ny kettle? Nivaha ny jiro tao amin'ny efitrano fandroana ve aho? Efa namadika ny fahitalavitra ve aho? ' Ny marika fanontaniana toa tsy hanelingelina anao.
Satria ny fiara ataonao hianatra izany vaovao izany, ary rehefa afaka kelikely, rehefa tafiditra ao anaty fiaranao ianao ary mandehandeha eny an-dàlana, dia hanontany anao izy hoe: 'Tsy misy olona ao an-trano, tianao ve ny mandinika ireo fitaovana momba ny trano sy hanomboka ny fizahanao?'
Izy dia hanangana scenario fialan-tsasatra ho an'ny trano ary hanidy ny zavatra rehetra izay tsy tokony hiasa ao an-trano ao aorianao amin'izay fotoana izay.
Ity ohatra ity dia iray amin'ireo toe-javatra mety hitranga.
Hahay hamorona sehatra ho an'ny fiaranao ianao ary hamorona sehatra ho anao.
İSPARK Hanamora ny Fiainan'ny Istanbulites amin'ny fanodinana teknolojia
Şereflikoçhisar hanamora ny varotra sira amin'ny lamasinina
Tetikasa hanamora ny fitaterana any amin'ny distrikan'i Alaşehir ao Manisa
Fampiharana fampihetsiketsehana 11 izay mahatonga ny fiainana ho mora kokoa amin'ny mponina any Istanbul
Mora foana ny fiainana
Vatan Şaşmaz, manatsara ny fiainako ny Metrobüs
Erence, Tale jeneralin'ny Konya Şeker: "nanjary mora kokoa tamin'i YHT ny fiainantsika"
Manatsara ny fiainan'ny olom-pirenena ny ATUS
Fampiharana fampihetsiketsehana 11 mahatonga ny fiainana ho mora kokoa amin'ny mponina any Istanbul
Fitarihana Elektronika sy Fampirantiana Elektronika Manatsara ny fiainana any Konya
Ny fananganana Limak dia nanomboka ny tetikasan'ny lalambe Ufa East any Rosia